Malezia: Miteraka adihevitra ny boky ‘manafintohina’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2011 5:15 GMT
boky Interlok. Avy amin'ny blaogin'i Hartal MSM
Adihevitra vaovao teraka tany Malezia ny olana momba ny boky iray natao boky fampiasa hitsongàna lahatsoratra ho an'ny literatiora any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa.
Interlok dia boky Maleziana nosoratan'i Abdullah Hussain ary nivoaka tamin'ny taona 1971. Niteraka tabataba izany rehefa lasa tsy maintsy vakian'ny mpianatra any amin'ny kilasy fahadimy noho izy miresaka momba ny Maleziana amin'ny teny tsy manaja.
Nitatitra ny gazety Maleziana amin'ny teny Anglisy mpivoaka isan'andro The Star :
Olona sy fikambanana maro no mitaraina ary mitaky ny fanesorana io boky io satria ao amin'ny andininy iray ao amin'ny pejy 211, ny teny hoe kasta pariah na sokajin'olona pariah dia voatonona amin'ny fomba nampiofanana ny Tamils avy amin'ny faritra maro amin'ny India Atsimo sy ny namoriana azy ireo tamin'ny sambo feno olona, ary ny niaretany andro lava sy itataovan-doza mba hahatongavana aty amin'ity firenena ity.
Fihetsika samihafa no nandraisana izany, miaraka amin'ny fanantenana fa asa famoronana fotsiny ity ary efa ela loatra no nivoaka ka tsy zo hitarafana ny fiaraha-monina ankehitriny intsony. Ny sasany mieritreritra fa ompa ho an'ny Indiana izany.
Ny mpitoraka blaogy mitondra ny solon'anarana hoe The Owl dia nanoratra:
Mety ho tsara na mety ho ratsy ny mpanoratra. Mety hamaky ny bokiny ianao, na mety hitsipaka azy, safidinao manokana izay. Nefa tsy azonao ovaina izay nosoratany, mba hanaraka izay tianao, na ny lanjam-piainana na ny toetry ny politika ankehitriny. Interlok, na ahoana na ahoana, dia boky tsy dia tsara loatra, ary raha tokony nanoratra tatitra momba azy isika dia ho nanohina mafy izany.
Araka izany voalaza izany ary dia manohitra ny fampiasana azy, na ny fitantarana azy any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa izahay. Araka ny hevitray ny rafi-pampianaran'i Malezia dia tsy mampirisika ny tsikera sy ny fandinihana. Ny mpianatra vokarin'ny rafi-pampianarana toa izany dia mety tsy ho ampy fahamatorana hikirakirana ny boky amin'ny tokony ho izy na hanana ny fomba fijery mahay mandinika ka hahita ny zava-drehetra mendrika amin'ilay boky.
Nanoratra ny mpitoraka blaogy drrafick:
Tsy fantatro hoe iza no nanomboka ny rafi-tsokajin'olona vaovao any India. Diso io ary tsy mifanaraka amin'ny fampianarana Silamo. Mampalahelo ny ankizy tsy manan-tsiny terena tanaty sokajy tsy izy tahaka ny pariah ka manohy ny fiainany miaraka amin'izany soratra izany eo an-tampon-kandriny. Tsy nifidy ny ho teraka amin'io sokajy io izy ary tsy rariny ny mbola hiantsoana azy tahaka izany.
Tokony hanaraka fitsipika ny boky fidiana hampiasaina ho fitaovam-pampianarana any amin'ny sekolim-panjakana. Iray amin'izany fitsipika izany ny momba ny fifanarahany amin'ny firenena. Tsy nahomby tamin'izany fitspàna izany ny boky INTERLOK. Tsy misy tokony hampahatsiahivana an'ireo ankizin'ity firenena ity ny zavatra nampiharin'ny razana teo aloha an-tsakany sy an-davany. Zara raha ampiharina ny rafi-tsokajin'olona ankehitriny aty Malezia ary tsara raha tsy ampahatsiahivina izany.
Kavi dia mino fa ratsy ny fitaovana am-pelatanan'ireo mpampianatra any amin'ny sekoly Maleziana hampianarana an'ireo mpianatra ny tantara:
Any Malezia, na dia manao teny manavakava-bolonkoditra aza ny talen'ny sekoly, azontsika atao ve ny miteny fa manana ny ampy ireo mpampianatra aty amintsika mba hitarihana ny ankizy araka ny tokony ho izy? Mazava fa tsy mahasahy manamafy lalàna sy fitsipika hentitra ny governemanta noho ny tahotra ny ho very mpanohana (na noho ny havendranany tsotra izao). Iza no hilaza fa na ireo mampianatra ireo aza ve hahalala tsara ny tena hevitry ny fampiasana ny teny “pariah” amin'io resaka io?
Ny mpampianatra dia tokony ho afaka hanazava amin'ireo ankizy ny antony nampiasana io teny io. Tokony efa nifankazatra tsara tamin'ny fomba fijerin'ny literatiora ry zareo ary hahatakatra tsara ny tantara Maleziana izay vao manandrankandrana manabe ankizy. Nefa na amin'ny tantara ampianarina novaovaina noho ny antony ara-politika aza dia ho tanteraka ve izany? Tsy miteny aho hoe toa izany daholo ny mpampianatra, fa tsy maninona raha ampahany vitsy amin'ny mpampianatra ihany no ratsy fitaovana. TSY METY ny fambolena fampianarana diso sy tsy mifandraika ao amin-tsain'ny ankizy, na fanahy iniana izany na tsia. Afaka manome toky ve ny Minisiteran'ny Fampianarana fa tonga saina amin'izany olana rehetra izany ireo mpampianatry ny KOMSAS ary hanome fomba fijery tsy mibilabila amin'ny ‘pariah’?
Tamin'ny fotoana nanoratana ity dia niteny ny Minisitry ny Fampianarana Muhyiddin Yassin fa hijanona ho ao anaty fandaharam-pianarana ny boky, na dia nisy aza nisy takelaka napetraka mba hamahana ny adihevitra.